တ႐ုတ္ အီး စီးက ရက္ ေအဂ်င္စီက အီး စီးက ရက္ တင္ပို႔ မႈမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ၈၂ ဘီလီယံ ရရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္း - Pandaily
တ႐ုတ္ အီး စီးက ရက္ ေအဂ်င္စီက အီး စီးက ရက္ တင္ပို႔ မႈမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇ ၈၂ ဘီလီယံ ရရွိ မည္ဟု ခန္႔မွန္း
Jun 15, 2022, 20:14ညနေ 2022/06/15 23:08:00 Pandaily
တရုတ် အီလက်ထရောနစ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်း ၏အီလက်ထ ရော နစ် စီးကရက် လုပ်ငန်း ကော်မတီက ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်E-စီးကရက် တင်ပို့ အပြာရောင် စာအုပ်အဂၤါေန႔ ။ ယခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် တင်ပို့မှု သည်ယွမ် ၁၈၆. ၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇. ၈၂ ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိ နိုင်ပြီး ပထမ သုံးလပတ်တွင် တင်ပို့မှု သည်ယွမ် ၄၅. ၃ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်ဟု အစီရင်ခံ စ ာက ခန့်မှန်းထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အီး စီးကရက် တင်ပို့မှု သည်ယွမ် ၁၃၈. ၃ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၈၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ရွိ အီး စီးက ရက္ လုပ္ငန္း ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အနက္ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ ပုိ႔ကုန္ ဦးစားေပး လုပ္ငန္း မ်ားျဖစ္ သည္။
ပထဝီအနေအထား အရ အပြာရောင် စာအုပ် သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် တင်ပို့မှု ပမာဏကို စျေးကွက် အမျိုးမျိုးတွင် တွက်ချက်သည်။ ၎င်းတို့အနက် အမေရိကန် စျေးကွက် သည် ၅၈% (ဒေါ်လာ ၇၃. ၃ ဘီလီယံ) ၊ အီးယူ နှင့် ဗြိတိန် က ၂၄% (ဒေါ်လာ ၃၄ ဘီလီယံ) ၊ ရုရှား က ၈% (ဒေါ်လာ ၉. ၇ ဘီလီယံ) ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ၅% နှင့် ၄% တို့ဖြင့် အများဆုံး စျေးကွက် ရှိသည်။
E-စီးကရက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုတွင် အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ အချို့ ရှိသော်လည်း လူ များစွာသည် စက်မှု တန်ဖိုး ကိုစဉ်းစား ရန် နှင့်စီးပွားရေး ပုံစံ အသစ် များနှင့်အတူ ပါ ၀ င်သည့် အန္တရာယ် လျှော့ချရေး နည်းပညာ များကိုလေ့လာ လို ကြသည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ ျပည္တြင္း အီး စီးက ရက္ ထုတ္လုပ္ မႈနဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ လုပ္ငန္း ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္၊ အီး စီးက ရက္ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ ေပါင္း ၁၉၀, ၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အီး စီးက ရက္ ျဖန္႔ျဖဴး မႈ ကြင္းဆက္ နဲ႔ ကုန္စည္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ေပါင္း ၁ သိန္း နီးပါး ရွိ မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျပည္တြင္း အီး စီးက ရက္ လုပ္ငန္း တြင္ လူ ၁ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔ကို တိုက္႐ိုက္ အလုပ္အကိုင္ ေပးထားၿပီး သြယ္ ၀ိ ုက္ အလုပ္အကိုင္ ေပးထား သူ ေလး သန္း ခန္႔ရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၅ ဒသမ ၅ သန္း ခန္႔ရွိ သည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် နိုင်ငံသည် အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ် သည်
ထို႔အျပင္ အီး စီးက ရက္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးၾကပ္ မႈ မ်ားကိုလည္း အရွိန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္။ ယခုနှစ် မတ်လ မှစ၍ “အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီအမံ များ” နှင့် “အီလက်ထရောနစ် စီးကရက် အတွက် အမျိုးသားအဆင့် စံနှုန်း များ” ကို အစဉ်လိုက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ထုတ်လုပ်မှု၊ လက်ကား ရောင်းဝယ် မှုနှင့် လက်လီ ရောင်းဝယ် မှုများတွင် လိုက်နာ ရမည့် လုပ်ငန်း များနှင့် အရွယ် မရောက်သေး သူများ၏ ကာကွယ် မှုကို ပိုမိုအားကောင်း လာစေရန် ရှင်းလင်းသော စံနှုန်း များနှင့် လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြခဲ့သည်။
Tags China | Electronic Cigarette | exports
News Sep 26 စက်တင်ဘာ 27, 2021